EPL: Kooxda Arsenal oo kaarka cas laga qaatay oo barbaro la gashay Leicester City, xilli Vardy uu goor dambe shabaqa gaaray… + SAWIRRO – Gool FM
(London) 07 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa barbaro 1-1 la gashay naadiga Leicester oo marti u ahayd, xilli Gunners kaarka cas laga qaatay kulankan.
Ciyaartan oo qeyb ka ahayd horyaalka Premier League ayay Arsenal kooxda Leicester City ku soo dhoweysay garoonkeeda, iyadoo goor dambe uu shabaqa gaaray Vardy.
Arsenal ayaa goolka la horreysay waxaana 21’daqiiqo u dhaliyey Pierre-Emerick Aubameyang, kaddib baas qurux badan oo uu ka helay da’yarka kooxda u soo baxay ee Bukayo Saka, Arsenal oo ciyaarta ku hoggaaminaya 1-0 ayaana lagu kala nastay.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Gunners ayaa jahawareer gashay kaddib markii uu kaarka cas ka qaatay Edward Nketiah oo bedel ku soo galay daqiiqaddii 75-aad, waxaana garoonka laga saaray isagoo kubadda taaban, kaddib markii uu taakal adag ku qabtay mid ka mid ah xiddigaha Foxes.
Yeelkeede, Leicester City ayaa la timid goor dambe goolkii barbaraha waxaana 84’daqiiqo u dhaliyey Jamie Vardy, kaddib caawin uu ka helay Demarai Gray oo bedel ku soo galay, waxaana uu kulanka ka dhigay gar isku mid ah 1-1.
Taasi waxa ay ka dhigan tahay in labada ciyaaryahan ee haatan ku tartamaya gooldhalinta horyaalka Premier League ay caawa shabaqa soo wada taabteen iyagoo min hal gool dhaliyey waana Aubameyang iyo Vardy.
Inkastoo fursado goolal loo filan karay la isku helay labada dhinac qeybtii labaad ee ciyaarta haddana kulanka ayaa waqtigii loogu talo galay ku soo dhammaaday barbaro 1-1, iyadoo labada kooxood ay dhibcaha ku qeybsadeen garoonka Emirates.
Arsenal ayaa haatan ku jirta kaalinta 7-aad iyadoo leh 50-dhibcood, halka Leicester City ay kaalinta afaraad iyadoo leh 59-dhibcood, waxaana kaalinteedii saddexaad ka xoogtay Chelsea.
Kooxda Chelsea oo saldhigatay kaalinta saddexaad kaddib guul ay u dhibtootay oo ay ka soo qaadatay Crystal Palace kulan la iska dhaliyey shan gool... + SAWIRRO